West Brom Oo Garoonkeeda Cashar Ugu Dhigtay Arsenal Iyo Shaqada Arsene Wenger Ee Gunners - Wargane News
Home Sports West Brom Oo Garoonkeeda Cashar Ugu Dhigtay Arsenal Iyo Shaqada Arsene Wenger...
Kooxda West Brom ayaa cashar ugu dhigtay garoonkeeda kooxda Arsenal iyagoo ku dubtay 3-1 waxaana ay uga mahadcelinayaan labo gool uu madax ku dhaliyay Dawson, guuldarada soo gaartay Arsenal oo ah tii labaad ee isku xigta ee Premier League ayaa cadaadiska ku sii kordhineysa tababare Wenger oo halis ugu jira inuu waayo shaqadiisa Emirates.
Tababare Arsene Wenger oo cadaadis uu dul saaran yahay ayaa kulankii maanta goob joog u ahaa labo fariimood oo iska soo horjeeday oo la dulmariyay garoonka Hawthorns, midii hore waxa ay ku baaqeysay inaan qandaraas cusub laga saxiixin oo uu Wenger baxo, halka mid kale oo garoonka la dulmariyay intii ay ciyaarta socotay ay aheyd mid lagu taageerayay Arsene Wenger.
Marka aan u soo degno ciyaarta waxa ay ku bilaabatay si xiiso leh iyadoo bilowgii ciyaarta ay labada kooxood fursado iska heleen balse aysan ka faa’ideysanin, laakiin kooxda martida loo ahaa ee West Brom ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta daqiiqadii 12aad.
Kubad gees laad ah oo ay soo tuureen ayaa waxaa madax ku dhaliyay Dawson iyadoo daafacyada Arsenal ay ahaayeen kuwa liitay oo aan kubada si fiican u difaacanin, waana mid ka mid ah goolasha badan ee kubadaha dhintay ee ay West Brom caanka ku noqotay xilli ciyaareedkan.
Seddex daqiiqo ka dib Arsenal ayaa jawaab celin ka sameysay goolkaas, iyadoo Xhaka uu kubad ugu dhex dhiibay xerada goolka Alexis Sanchez kaasoo waqti u qaatay inuu kubada shabaqa meel kore ka geliyo iyadoo ciyaarta ay noqotay barbaro 1-1 ah.
Goolkaas uu dhaliyay Alexis Sanchez waa goolkiisii 47aad ee Premier League ee uu u dhaliuyo Arsenal waxaana uu ka hormaray Adebayor iyo Ljunberg isagoo soo galay kaalinta sideedaad ee xiddigaha ugu goolasha badan kooxda ee Premier League.
Aaron Ramsey span Gareth McAuley with a clever turn, before shift the ball into his left foot and drilling a low, hard shot towards the bottom right hand corner.
Goolhayaha West Brom Ben Foster ayaa fursad cajiib ah ka beeniyay Aaron Ramsey iyadoo daafacyada ay u dagaalameen inay kubada bixiyaan iyadoo Theo Walcott uu isku dayay inuu kubada ku celiska aheyd shabaqa dhex dhigo.
Daqiiqadii 34aad West Brom ayaa mar kale ku dhawaatay inay hogaanka u qabato ciyaarta, Livermore ayaa kubad dhex bixis ah u dhigay Fletcher oo xerada goolka ku jiray, waxaana ay aheyd fursad gool loo fishay laakiin darbadii Fletcher waxaa si fantastik ah oo cajiib ah u badbaadiyay goolhaye Petr Cech.
Ka dib badbaadintaas cajiibka ah ee uu sameeyay Petr Cech ayaa dhaawacmay isagoo kubad baas ah u dhigayay mid ka mid ah difaacyadiisa, waxaana ay u muuqatay in muruqa kubka inuu dhaawac ka soo gaaray, waxaana bedelay goolhaye David Ospina, iyadoo Petr Cech ay u sacbiyeen jamaahiirta West Brom oo u diir naxay goolhayaha halyeeyga ah.
Dhamaadkii qeybta hore ee ciyaarta kooxda Arsenal ayaa cadaadis ku heysay West Brom laakiin ma aysan helin goolkii ay baadigoobayeen waxaana ay ciyaarta ku soo ildaatay qeybtii koowaad barbaro gool iyo gool ah.
Si qabow ayay ku bilaabatay qeybtii labaad iyadoo Arsenal ay kubada heysatay inta badan laakiin West Brom ayaa fursad halis ah heshay daqiiqadii 50aad. McClean ayaa karoos cagta bidix ah soo qaaday, Rondon ayaa madax la helay laakiin kubada waxa ay hareermartay goolka.
West Brom ayaa hogaanka mar kale ciyaarta u qabatay daqiiqadii 55aad, Robson-Kanu oo daqiiqad kaliya ku jiray garoonka ayaana shabaqa ka soo taabtay Arsenal. Nacer Chadli oo qalad ku lahaa goolkii barbaraha ee Alexis Sanchez ayaana kubad u qaaday McClean laakiin waxaa kaga soo hormaray goolhaye Ospina oo ku guuldareystay inuu gacmaha ku dhigo kubada iyadoo ay kaga dhacday jilibka, kubadii soo laabatay waxaa shabaqa ku taabtay Robson-Kanu iyadoo McClean oo offside ahaa ka dulbooday.
Arsenal ayaa ka mudaharaaday in goolkaas uu garab dhaaf ahaa laakiin watashi ay yeesheen garsooraha iyo caawiyihiisa waa la ansixiyay goolka iyadoo West Brom ay hogaanka ku qabatay 2-1.
Hal Robson-Kanu ayaa noqday bedelkii ugu horeeyay ee West Brom ee dhaliya gool Premier League ah tan iyo Craig Gardner markii uu shabaqa soo taabtay kulanki ay Chelsea barbaraha 2-2 la galeen ee 13kii Janaayo 2016.
Daqiiqadii 65aad kooxda Arsenal ayaa ku dhawaatay inay ciyaarta barbareyso mar kale iyadoo kubad gees laad ah oo ay soo tuureen uu madaxa la helay Danny Welbeck laakiin waxaa ka soo beenisay birta goolka.
Daqiiqadii ku xigtay West Brom ayaa heshay labo fursadood oo isku xiga oo goolal loo fishay, marka hore Robson-Kanu ayaa kubad loo dhex bixiyay isagoo la kortagay goolhaye Ospina laakiin darbadiisa waa ay dhaafi weysay goolhaye, kubadii soo laabatay waxaa helay Nacer Chadli kaasoo goolka dhinac maray laakiin darbadiisa goolka waxaa soo bixiyay Shkhordar Mustafi.
Si kasta oo ay Arsenal u dadaasho waxa uu dadaalkooda noqday hal bacaad lagu lisay markii West Brom ay heshay goolkii seddexaad ee ay ciyaarta ku dishay daqiiqadii 75aad.
Goolka seddexaad waxa uu la mid ahaa sida goolkii koowaad oo kale, West Brom ayaa kooner soo qaaday, waxaana ugu madax dheeraa oo kubada madaxa la helay Dawson kaasoo markaan ku guuleystay inuu kubada dabamariyo goolhaye David Ospina.
Islamarkii ay uu goolka seddexaad ka dhashay Arsenal, jamaahiirta kooxda ayaa la soo baxay boorar ay ku qornaayeen “Wenger Out” oo ka dhan ah tababaraha Gunners iyagoo aan ku qanacsaneyn xaalada ay kooxdooda ku jirto.
Waxa ay ciyaarta ku soo idlaatay 3-1 ah oo ay West Brom ku garaacday Arsenal, waana natiijadii Arsenal looga badiyay kulankoodii ugu danbeysay ee ay la ciyaareen Liverpool.
Arsenal ayaa u dhici karta kaalinta lixaad berri haddii Man United ay ka soo badiso Middlesbrough, madaama farqiga haatan u dhaxeeya labada kooxood uu yahay hal dhibic.
Somaliland: ” Hantidii Umada Si Ba,an Baa Loo Boobay ..” Wasiika Hawlaha Guud Ee Somaliland